Isevisi ye-OEM / ODM - Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
Ama-OEM kanye nama-oda wokuhweba angaphandle
I-HuiZhou VIVIBetter emaphaketheni Co., Ltd iyona yokuqala ebandakanyeka ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwebhizinisi lepulasitiki nelokuthungwa, kusukela esizukulwaneni sokuqala semikhiqizo kuya esizukulwaneni esisha semikhiqizo yepulasitiki, iVivibetter ngemizamo yokuthuthuka kwezinto ezintsha, futhi ekugcineni embonini yemikhiqizo epulasitiki engenawo amanzi yasungula i-R & D eqinile kanye nesisekelo sokukhiqiza ezweni. Isungule inethiwekhi yokuthengisa ephelele kanye nomenzeli wokusabalalisa. Uyemukelwa ukujoyina imikhiqizo yethu, xhumana neHuiZhou ViviBetter packaging Co, Ltd., Wajoyina imininingwane yokuqonda okwengeziwe kwesimo!
Isevisi ye-OEM, i-ODM
"Inhlanganisela ephelele yokuzimela, eguquguqukayo, engenayo, inani" lensizakalo ye-OEM ethandwayo, izixazululo ze-OEM zizoba ukukhetha okuhlakaniphile kwenkampani yakho. Noma ngabe usekhaya noma uphesheya, ngokuvumelana nezifiso zakho, ngaphandle kotshalo-mali olukhulu, ukulondolozwa kwazo zonke izici zababonisi. Ukukhiqizwa kokuphakelwa kwekhwalithi ephezulu okungangenwa ngamanzi ngokuhambisana nezindinganiso zamazwe omhlaba kuwe; Intengo enhle kakhulu, ukusabela okusheshayo, ukuxhumana ngqo nejubane lethu lengqondo nezinsizakalo zobungcweti.
Sihlala sithatha ukwaneliseka kwamakhasimende njengenhloso yokuqala. Hlonipha izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ahlukene, amakhasimende ukufinyelela isixazululo nge-OEM ehlukile.
Ukunqunywa kwenqubo yemishini
1, Izidingo zokucubungula umkhiqizo wamakhasimende, shayela / vakashela iwebhusayithi yethu noma ucele ibhukwana le-OEM ukuqonda imininingwane yokubambisana
2, Amakhasimende ethu ayamenywa ukuba avakashele ifektri
3, Imakethe yethu kanye nezokuxhumana nezobuchwepheshe namakhasimende
I-4, imikhiqizo yakho yokucubungula isampula ngokuya ngezidingo zamakhasimende
5, Isipiliyoni seKhasimende, uhlelo lomkhiqizo, impendulo yokuthuthukisa yethu kuze kube yilapho zombili izinhlangothi zifinyelela esivumelwaneni
I-6, Ikhasimende lokukhetha uhlelo lwe-OEM nezinkontileka zokucubungula ezisayinwe nenkampani yami
I-7, Ikhasimende lidingeka yinkontileka kusengaphambili Ukucubungula isigaba se-50%
8, Amakhasimende nokuqala kwethu ukusebenza
9, Sakha amafayela wamakhasimende
I-HuiZhou VIVIBetter emaphaketheni Co., Ltd inkampani inikeza uhla oluphelele lokukhiqizwa kwe-OEM, njengoba umthengisi wepulasitiki ongangenisi amanzi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ze-OEM eyodwa, futhi anikeze uhla oluphelele lwemikhiqizo esezingeni eliphezulu ye-OEM yokuhlinzeka ngemisebenzi yamakhasimende amaningi aphesheya kwezilwandle kuma-ejenti amaningi wesifunda asekhaya ! Ukubheka okuhle ngemakethe yomkhiqizo ongangenwa ngamanzi, bafuna ukusungula uhlobo lwabo lwe-OEM? I-HuiZhou VIVIBetter Packaging Corporation ayikwazi ukungahambi kahle, ikhwalithi enhle, intengo enhle kakhulu, insizakalo enhle, amandla ezimele emisha